ခါးပတ်စစ်ထုတ်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ခါးပတ်စစ်ထုတ်စက် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
CHI SHUN MACHINERY PLANT CO., LTD. ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် ခါးပတ်စစ်ထုတ်စက်။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwanအဆင်ပြေလွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်လျောအလွန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မတူညီတဲ့အမှတ်အသားအမျိုးမျိုးနဲ့တန်ဖိုးထားကြသည်။
ဤအမျိုးအစားသည် NBD ထက်ကြီးသည်-L ကိုအမျိုးအစား.
Double Rotary Drum Thickener ဒီဇိုင်းသည်ရွှံ့နွံ၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်ကိုကိုင်တွယ်။ ပိုကြာရှည်သောစစ်ထုတ်သည့်အထည်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေရန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောကုန်းမြေကိတ်များရရှိရန်အတွက် roller အဝတ်အထည်များကိုပိုမိုကြာရှည်စွာစစ်ထုတ်သည့်အထည်သည်.
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသောရေယိုစီးမှုစွမ်းရည်သည် NBD ၏သာလွန်မှုဖြစ်သည်-H အမျိုးအစားခါးပတ်စာနယ်ဇင်း.
B 200 2000 ၂၄~၄၀ 360~600 2~821/2 1/၂&ကြိမ်;၂ 16.4 4269
B 250 2500 ၃၆~53 550~800 2~821/2 1/၂&ကြိမ်;၂ 20.3 4346
E 300 3000 46~၇၃ 690~1100 2~831 1/၂&ကြိမ်;၂ 24.2 4620
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sludgetreatment.com.tw/my/belt-filter.html
အကောင်းဆုံး ခါးပတ်စစ်ထုတ်စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ခါးပတ်စစ်ထုတ်စက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ခါးပတ်စစ်ထုတ်စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan